श्रीमान अफिस बाट फर्केका बेला श्रीमती घरमै परपुरुषसँग र’ङ्गे हा’त भेटेपछि !! – ramechhapkhabar.com
श्रीमान अफिस बाट फर्केका बेला श्रीमती घरमै परपुरुषसँग र’ङ्गे हा’त भेटेपछि !!
विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण धेरैका घरमा समस्या आएका छन् । आफ्नो परिवारसंग सन्तोष नभएर अर्कालाई ता क्दा एक पुरुषको ज्यान गएको छ । श्रीमान नभएको बेलामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाएर रोमान्स गरेकै बेलामा श्रीमान आइपुगेपछि भा ग्ने क्रममा पाँचौं तलाबाट हाम फाल्दा पुरुषको ज्यान गएको छ । यो घ’टना भारतको दिल्लीको हो । दक्षिणी दिल्लीको टिग्री क्षेत्रमा रहेको जेजे कोलोनीमा बसोबास गर्दै आएका ती पुरुषलाई आ’पत्तिजनक अवस्थामा ती महिलाका श्रीमानले भेटेका थिए ।
ढोकामा चुकुल लगाउन समेत विर्सिएर उनीहरु एक अर्कामा लि प्त हुँदै थिए । त्यही बेलामा श्रीमान आएको पनि थाहा पाएनन् ।जब श्रीमानलाई ढोकामा देखे ति पुरुष हतार हतार भा ग्ने क्रममा भवनको पाचौं तल्लाबाट हाम फाले । उनलाई घा’इते अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । तर अस्पतालमा लगिएपनि उनको ज्यान भने जोगिएन । श्रीमानले रंगेहात देखेपछि देह त्या’ग गर्ने प्रयास गरेकी श्रीमती भने जोगाइएको छ ।
ति महिलालाई श्रीमान र उनका प्रेमीले बचाएका थिए । श्रीमान घर बाहिर गएको मौकामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । बाहिर गएका श्रीमान खबरै नगरी घर फर्कदा श्रीमतीलाई रं’गे’हा’त देखेका थिए । कोठाभित्रबाट चुकुल नलगाएको अवस्थामा उनीहरु रमाइरहेका थिए । प्रहरीले तीनै जनाको मोबाइल फोन ज फ त गरेर अनुसन्धान जारी राखेको जनाइएको छ ।